Isaya 5 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Rwiyo rwemunda waJehovha wemizambiringa (1-7)
Nhamo pamunda waJehovha wemizambiringa (8-24)
Mwari anotsamwira vanhu vake (25-30)
5 Regai ndiimbire mudiwa wanguRwiyo rune chekuita nemudiwa wangu nemunda wake wemizambiringa.+ Mudiwa wangu aiva nemunda wemizambiringa mujinga mechikomo chakaorera. 2 Akautimba, akaubvisa matombo. Akadyara muzambiringa mutsvuku wakanaka kwazvo mauri,Akavaka shongwe pakati pawo,Uye akachera chisviniro chewaini mauri.+ Zvadaro, akaramba achitarisira kuti uchabereka mazambiringa,Asi iwo wakabereka mazambiringa emusango chete.+ 3 “Zvino, imi vagari vemuJerusarema nevarume veJudha,Ndinokumbira kuti mutonge pakati pangu nemunda wangu wemizambiringa.+ 4 Pachiine here chimwe chandingadai ndakaitira munda wangu wemizambiringaChandisati ndatoita?+ Pandaitarisira kuwana mazambiringa,Nei iwo wakabereka mazambiringa emusango chete? 5 Zvino chiregai ndikuudzeiZvandichaitira munda wangu wemizambiringa: Ndichabvisa ruzhowa rwawo*Uye iwo uchapiswa.+ Ndichaputsa rusvingo rwawo rwematombo,Uye iwo uchatsikwa-tsikwa. 6 Ndichaita kuti usare usina chinhu;+Hauzochekererwi kana kusakurwa. Uchavhungwa nemakwenzi eminzwa nemasora,+Uye ndichaudza makore kuti asatombotumira mvura pauri.+ 7 Nekuti imba yaIsraeri ndiyo munda wemizambiringa waJehovha wemauto;+Varume veJudha ndivo munda wemiti waaida chaizvo. Akaramba achitarisira kuti patongwe zvakarurama,+Asi paitongwa zvisina kururama;Achitarisira kururama,Asi paiva nekuchema nemhaka yekutambudzika.”+ 8 Vane nhamo vaya vanobatanidza imba neimwe imba+Uye vanobatanidza munda nemumwe munda+Kusvikira pasisina nzvimboUye mava kugara mega panyika! 9 Jehovha wemauto apika munzeve dzanguKuti dzimba zhinji, kunyange dziri huru uye dzakanaka,Dzichava chinhu chinoita kuti vanhu vatye,Dzisina anodzigara.+ 10 Nekuti maeka gumi* emunda wemizambiringa achabudisa bhati* rimwe chete,Uye homeri* yembeu ichangobudisa efa* imwe chete.+ 11 Vane nhamo vaya vanomukira mangwanani kuti vanwe doro,+Vanoramba vachingonwa kusvikira kwasviba, kusvikira waini yava kuvapengesa! 12 Pamitambo yavo pane rudimbwa nechiridzwa chine tambo,Netambureni, nenyere, newaini;Asi havafungi zvinoitwa naJehovha,Uye havaoni basa remaoko ake. 13 Saka vanhu vangu vachatapwaNemhaka yekushayiwa ruzivo;+Varume vavo vanokudzwa vachashaya zvekudya,+Uye vanhu vavo vese vachafa nenyota. 14 Saka Guva* rakawedzera kukura kwaro*Uye rakashama muromo waro zvisina muganhu;+Uye kunaka kukuru kweguta racho,* vanhu varo vazhinji vane ruzha, nevaya vanoita mafaro akanyanyisa,Zvese zvichapinda muGuva racho. 15 Munhu achaninipiswa,Murume achaderedzwa,Uye maziso evanozvikudza achaderedzwa. 16 Jehovha wemauto achakwidziridzwa nemutongo wake;*Mwari wechokwadi, iye Mutsvene,+ acharatidza utsvene hwake kuburikidza nekururama.+ 17 Makwayana achafura sekunge ari mumafuro awo;Vanhu vekune imwe nyika vachadya munzvimbo dzaimbogarwa nemhuka dzakakodzwa. 18 Vane nhamo vaya vanokweva kukanganisa kwavo netambo dzekunyengera,Uye chivi chavo netambo dzengoro; 19 Vaya vanoti: “Ngaaite basa rake achikurumidza;Ngaakurumidze kuriita tirione. Chinangwa* cheMutsvene waIsraeri ngachiitikeKuti tichizive!”+ 20 Vane nhamo vaya vanoti zvakanaka zvakaipa uye zvakaipa zvakanaka,+Vaya vanoisa rima panzvimbo pechiedza uye chiedza panzvimbo perima,Vaya vanoisa zvinovava panzvimbo pezvinotapira uye zvinotapira panzvimbo pezvinovava! 21 Vane nhamo vaya vanozviti vakachenjeraUye vanozviti vakangwara!+ 22 Vane nhamo vaya vane simba pakunwa wainiNevarume shasha pakuvhenganisa doro,+ 23 Vaya vanoti munhu akaipa haana mhosva nekuda kwechiokomuhomwe+Uye vasingatongeri munhu akarurama zvakanaka!+ 24 Saka sekuparadza kunoita rimi remoto mashangaUye sekuputana kunoita uswa hwakaoma mumarimi emoto,Midzi yavo ichaora,Uye maruva avo achati mwarara seupfu,Nekuti vakaramba mutemo* waJehovha wemautoUye havana kuremekedza shoko reMutsvene waIsraeri.+ 25 Ndokusaka Jehovha atsamwira zvikuru vanhu vake,Uye achatambanudza ruoko rwake kwavari ovarova.+ Makomo achazununguswa,Uye zvitunha zvavo zvichaita semarara mumigwagwa.+ Nekuda kweizvi zvese, kutsamwa kwake hakuna kupera,Asi ruoko rwake ruchakatambanudzwa kuti rurove. 26 Akasimudzira rudzi ruri kure chiratidzo;*+Akaruridzira muridzo kuti ruuye ruchibva kumigumo yenyika;+Tarisai muone! vari kuuya vachikurumidza chaizvo.+ 27 Pakati pavo hapana akaneta kana ari kugumburwa. Hapana ari kutsimwaira kana kurara. Bhandi riri muzviuno zvavo harina kusununguka,Uyewo tambo dzeshangu dzavo hadzina kudambuka. 28 Miseve yavo yese yakapinza,Uye uta hwavo hwese hwakakombamiswa.* Mahwanda emabhiza avo akaita sedombo rakaomarara,Uye mavhiri avo akaita sedutu.+ 29 Kudzvova kwavo kwakaita sekweshumba;Vanodzvova seshumba dzine simba.*+ Vachaomba vobata mhukaVoenda nayo pasina anoinunura. 30 Pazuva iroro vachaidzvoveraSekutinhira kwegungwa.+ Munhu anoramba akatarisa nyika yacho achaona rima rinotambudza;Kunyangewo chiedza chasviba nemhaka yemakore.+
^ Kana kuti “heji yawo.”
^ ChiHeb., “zvipani gumi.”
^ Ona Tsanangudzo Yemashoko pana “Sheori.”
^ Kana kuti “mweya waro.”
^ Kana kuti “Uye vanokudzwa veguta racho.”
^ Kana kuti “nekutonga kwake zvakarurama.”
^ Kana kuti “Chisarudzo.”
^ Kana kuti “murayiro.”
^ Kana kuti “bango rechiratidzo.”
^ Kana kuti “hwakakungwa.”
^ Kana kuti “seshumba dzava nezenze.”